Riqicha Daawwitii irraa hojjatame. - NuuralHudaa
On Apr 1, 2018 64
Riqichi kun biyya chaayinaa daggala guddaa tokko keessatti gaara 2 jiddutti hojjatame. ol fageenyi isaa lafarraa Meetira 300 yoo tahu, lafarra ammoo Meetira 430 dheerata. akkasuma meetira 6 bal’ata. Riqichi kun Diizaayinara lammii israa’el kan tahe nama Haim Dotan jedhamuun Diizaayinni lafa kaayame, baasiin itti bahes Doolaara Ameerikaa Miiliyoona Sadihiif Kuma Dhibba Afur ($3.4 M).
Riqichi Kun Daawwitii Haalaan Yabbuu tahe 99, dachaa 3 walirraan kaayuun hojjatame. Guyyaa tokkotti Tuuristoota 8,000 qofatu akka irra bahan hayyamama. namoonni heddu wayta riqicha kanarra bahanii gubbaa gadi laalan, miila ofii jalaan hallayyaa guddaa waan arganiif Sodaatanii harkaan lafa qabatu.
eega Riqichi kun hojjatamee Xumuramee booda yaaliidhaaf Makiinaa irra oofanii jabeenya isaa mirkaneessanii jiru.
July 6, 2022 sa;aa 7:08 am Update tahe